के7बीज मूल्यवान छ? - पालना दृश्य
के7बीज हेर्न लायक छ?
by फ्रेंकी 1st डिसेम्बर 2020 9th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड मा7बीजहरू लायक हेरिरहेको छ?
Se बीज एकदम नयाँ एनिमेस हो जुन नेटफ्लिक्समा जून २०१7मा रिलीज भएको थियो। यो मूल रूपमा म written्गाबाट लिइएको हो। युमि तामुरा। म निश्चित गर्न चाहन्छु कि तपाईंलाई थाहा छ कि यो7बीजहरूको समीक्षा हो। एनिमेमले बचेकाहरूको समूहलाई वर्णन गर्दछ जुन मानव जातिको अस्तित्व सुनिश्चित गर्न मद्दतको लागि पृथ्वी र मानवता परियोजनाको हिस्सा हुन्।
प्रत्येक देशले सामूहिक समूहका केही सबै भागहरू चयन गर्दछ जो बचेका हुनेछन्, उनीहरूलाई7बीज भनिन्छ र यसैले यसलाई7बीज परियोजना भनिएको छ। प्रश्न यो हो कि Se बीज हेर्न लायक छ? म प्रयास गर्न जाँदैछु र मेरो कारणहरू मार्फत जाँदैछु यदि तपाई too बीजहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै टाढा नदिई।
सिंहावलोकन - के7बीज हेर्न लायक छ?
Se बीजहरूमा धेरै समस्याहरू थिए जुन मैले उल्लेख गरें र चौथो एपिसोडद्वारा उनीहरूले वास्तवमै स्ट्याक गर्न सुरू गरे। यदि तपाईं यस अंश र पात्रहरू पढ्न चिन्तित हुन सक्नुहुन्न भने म तपाईंलाई सूचीमा तल स्क्रोल गर्न सुझाव दिन्छौं जहाँ हामी discuss बीजहरू हेर्न लायकका कारणहरू र कारणहरू worth बीजहरू हेर्न लायकका छैनन् भनेर चर्चा गर्दछौं, यसले बचत गर्दछ। तपाईं केहि समय। सिंहावलोकनले Se बीजहरूको समीक्षामा थप गर्नेछ।
Se बीज, एपिसोड - - के Se वटा बीज हेर्नु लायक छ?
प्रत्येक देशसँग यी छनौट भएका व्यक्तिहरूको समूह छ। त्यसपछि तिनीहरूलाई स्थिर निद्रामा राखिन्छ र समयको एक निश्चित मात्राको लागि छोडिन्छ र त्यसपछि तिनीहरू सबै उठ्छन्। तिनीहरू निद्रामा स्थिर भएको कारण हो किनभने क्षुद्रग्रह पृथ्वीमा हिर्काउने छ र तिनीहरू केवल बाँच्नेहरू हुन्। त्यहाँ पूर्व निर्धारित लक्ष्य पृथ्वीलाई पुन: बसोबास गर्नु हो।
मुख्य कथा - के Se बीज हेर्न लायक छ?
Se बीजको मुख्य कथा यदि राम्रो रमाईलो छ तर यो एक विशेष बिषय वा तत्वमा लाइनर हो। मेरो यो मतलब के हो चित्रण भएका कथाहरू सुरु tun दर्शनसँग मिल्दोजुल्दो छ। हामी समग्र समस्याबाटै सुरु गरौं जुन तिनीहरू जापानमा रहेको यो नयाँ टापुमा अब जंगलीमा बाँच्न सक्ने देखिन्छ। भूभागलाई उनीहरूले एक पटक चिनेका थिए जापानलाई परिवर्तन गरिएको छ र यो कुरा पत्ता लाग्यो कि यो ग्रहको ग्रहबाट years बर्ष भन्दा बढी बितिसकेको छ। यो कथा संरचना हामीलाई7बीज समीक्षा गर्न मद्दत गर्दछ।
कथा एक्लैले वेथरमा ठूलो भाग खेल्दछ वा हैन7बीज हेर्न लायक छ वा छैन। यसले केही बाँचेकाहरूको लागि ठूलो समस्या प्रस्तुत गर्दछ किनकि तिनीहरू बिउँझदा तिनीहरूमध्ये धेरैजनाको परिवार थियो त्यसैले तिनीहरू अहिले स्पष्ट रूपमा मृत भएका छन्। यसले धेरै पात्रहरूलाई तर्कहीन र अविश्वसनीय तरिकाले कार्य गर्दछ किनकी तिनीहरू सँधै किनारमा हुन्छन्, तिनीहरू सोच्दै छन् कि तिनीहरू अर्को हुन्छन् र एक अर्कालाई जीवित राख्न झगडा गर्छन्।
कथा तब प्रत्येक समूहको कार्यलाई राम्ररी पछ्याउँछ जब तिनीहरू नयाँ इलाकामा जान्छन् र प्रगति गर्छन्। त्यहाँ गरेको समयमा उनीहरूले अरू मानिसहरू भेट्टाए जो Se बीज परियोजनाको भाग पनि हुन्। यी मानवहरूले उनीहरूलाई परियोजनाको बारेमा पनि भन्छन् र तिनीहरू त्यहाँ कति लामो समय सम्म आएका छन्। यस्तो देखिन्छ कि7बीजहरू बाँचेकाहरू सबै बिभिन्न समयमा उठ्दछन्। त्यसो भए7बीज हेर्न लायक छ? एक अस्तित्व को दृष्टिकोण बाट तपाईं लाग्छ कि मानव जाति को अस्तित्व सुनिश्चित गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरिका भनेको सबै एकै समयमा उजाड गर्नु पर्छ? ठिकै Se बीजमा होईन, यसमा समस्या आउन सक्छ समस्या प्लट गर्दै गर्दा म यसलाई हेर्दा आएँ र हामी पछि समस्यामा पर्नेछौं तर पहिला यहाँ पात्रहरू छन्।
मुख्य पात्रहरू - के7बीज हेर्न लायक छ?
Se बीजका पात्रहरू विशेष गरी बिर्सिन सक्ने र मेरो विचारमा बोरिंग थिए र ती मध्ये कुनै पनिले मेरो चासो कुनै पनि हिसाबले उकासेन। ती सबै एक खास समूहमा फिट हुनको लागि तयार पारिएको देखिन्छ वा दिमागमा एकल उद्देश्यको साथ डिजाइन गरिएको थियो। तपाईंसँग लजालु शान्त केटी नत्सु इवाशिमिजु थियो, समग्र अतिशयोक्तिपूर्ण कष्टप्रद केटा जो अरू सबैको स्नायुहरूमा पुग्छ र परिस्थितिलाई दिईएको सबैभन्दा विलक्षण तरिकामा काम गर्छ, सेमीमारू आसाई, अल्फा पुरुष प्रकार चरित्र वा प्रत्येक व्यक्ति म उसलाई वर्णन गर्छु। Se बीजमा भएका धेरैजसो पात्रहरू जो वास्तवमै महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय भूमिकाका थिए, मैले एपिसोडको पहिलो जोडीमा बिर्सिदिएँ र म तिनीहरूको नाम वा उनीहरूका समस्याहरू र विशेषताहरू सम्झन म साँच्चिकै संघर्ष गरें।
पहिले हामीसँग नाट्सु इवाशिमिजु छन् जो मुख्य पात्रको प्रकारका हुन्छन्, यद्यपि परिप्रेक्ष्य समूहबाट अर्को समूहमा परिवर्तन हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ मूलतः एक हुँदैन। उनी हावा टाउको ditzy प्रकार चरित्र संग फिट हुन्छ र वास्तव मा उनको बारे मा ध्यान दिन को लागी केहि महत्वपूर्ण छैन वा मलाई याद छ।
यस बाहेक उनी धेरै दयालु छिन्, साधारणबाट बाहिर केहि पनि छैन। उनी लजालु, दयालु छिन् र कसैको बाटोमा छिर्दैनन्, अरूलाई मात्र सहयोग पुर्‍याउँछन् र गर्मी टोली बी समूहलाई अझ राम्रो सहयोग पुर्‍याउँछन्।
अर्को हामीसँग अरशी अओटा छन् प्रत्येक पुरुष अर्ध-अल्फा पुरुष, जो शुरूदेखि नै मेरो स्नायुहरूमा पुग्यो। उसलाई मात्र उल्लेखनीय गहराई त्यो वास्तविकता थियो कि उहाँ शृंखलाका घटनाहरू अगाडि प्रेमिका गर्नुहुन्थ्यो। हामी केवल उनलाई संक्षिप्त फ्ल्यासब्याकको श्रृंखलाका माध्यमबाट हेर्न सक्छौं र त्यो हामीलाई दिइएको सबै बारे हो।
यो हामीलाई, दर्शकहरू, अओटासँग लगानी गर्न केही दिने कुरा हो, तर यसले मलाई त्यस्तो प्रभाव गरेको थिएन, मैले उनको सम्बन्धको बारेमा कडाईका साथ टस दिएँ, किन उनीहरूले सोचे कि यी संक्षिप्त फ्ल्याशब्याकहरू हामीलाई हेरचाह गर्न पर्याप्त हुनेछन्? मलाई थाहा छैन।
अन्तमा हामीसँग सेमिमारू असई छन्, कष्टकर, अतिरंजित अर्ध विरोधी जुन श्रृंखलाको लगभग सबै चीजको बारेमा चिन्ता गर्छ। उसको सामान्य अद्वितीय चरित्र छ, त्यहाँ उसको बारेमा कुनै रोचक वा चिसो छैन।
उसको कुनै वास्तविक गहिराइ छैन र दिईएको कुनै पनि अस्पष्टतामा समाप्त भयो, जसले उसको चरित्र पूर्ण उबासी र चिन्ताजनक बनाउँदछ। त्यहाँ एउटा दृश्य छ जहाँ उसले आफ्नो गृह शहरको बारेमा कुरा गर्छ तर यस्तो खराब काम गरेको थिएन जुन मैले कडा हेरचाह गरे। उनीहरूले उसलाई उसको आवाज कम गर्ने प्रयास गरे कि यो गहिरो सुनिन्छ तर त्यसले काम गर्दैन।
उप क्यारेक्टरहरू - के7बीज हेर्न लायक छ?
धेरै मुख्य पात्रहरू जस्तै उप पात्रहरू प्रायः उस्तै थिए, यद्यपि तिनीहरू नेटबाट उम्के किनकि तिनीहरू राम्रा बिर्सिएका थिए तर अझै उप पात्रहरू। ती मध्ये कुनै पनि अनौंठो, रमाईलो प्रशंसनीय वा मूल पनि थिएन र यसले श्रृंखला पनि हेर्न अझ गाह्रो बनायो, जस्तो कि कथा पर्याप्त खराब थिएन। मसँग वास्तवमै तिनीहरू सबैलाई समावेश गर्न समय थिएन, त्यहाँ तिनीहरूमध्ये धेरै थियो।
कारण यो हेर्न लायक छ - के7बीज हेर्न लायक छ?
मूल र अद्वितीय कथा (प्रकारको) - के7बीज हेर्न लायक छ?
Se बीजको कथा भित्र पस्न एकदम सजिलो छ र कथा बुझ्न वा तपाईंको टाउको वरिपरि प्राप्त गर्न गाह्रो छैन। यो आफैंमा केही जमिन तोडेको छैन तर यस एनिमेसनले ताजा र नयाँ कुरा प्रस्तुत गर्यो जुन मैले यस वर्षमा अवलोकन गरेको थिएन र त्यसको लागि म आंशिक आभारी छु। मलाई थाहा छ पृथ्वीको अन्तमा अन्तिम मानवहरूको कथा कुनै नयाँ कुरा होइन। जहाँसम्म, सन्दर्भमा हामीलाई दिइएको छ, र पात्रहरूको यी नयाँ सूचीको साथ मलाई लाग्छ यो सुरक्षित हुन सुरक्षित छ। यसले अझै the सीड हेर्ने लायकको प्रश्नमा थप गर्दछ?
एनिमेसन शैली - के7बीज हेर्न लायक छ?
सुरुमा मलाई Se बीजको एनिमेसन शैलीसँग वास्तवमै कुनै समस्या भएन, मैले त्यस्तो मन पराए तर म कुनै कुराको प्रशंसा पनि गरिरहेको छैन। त्यहाँ त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन जुन मैले टिप्पणी गर्न सकें, तर त्यस्तो केही त्यस्तो कुरा होइन कि यो यसमा मेरो व्यक्तिगत टिप्पणीको लागि योग्य हुनेछ। मलाई लाग्छ सही २ शब्दहरू अत्यधिक सन्तुष्ट हुने थिए। हेर्दा यो राम्रो लाग्यो, म त्यसलाई दिनेछु। त्यसो भए7बीज हेर्न लायक छ?
आंशिक रूपले कल्पना योग्य पात्रहरू - के Se वटा बीजहरू हेर्न लायक छन्?
Se वटा बीजका पात्रहरू कम्तिमा भन्न योग्यका थिए। त्यहाँ वास्तवमै उनीहरूको बारेमा बाध्यकारी वा चाखलाग्दो कुरै थिएन। ती शृंखलामा वास्तवमै कुनै समस्या भएका छैनन्, त्यहाँ वास्तवमै उनीहरूको बारेमा धेरै कुरा भनिएको छैन, म वास्तवमा भन्न खोज्दै छु। प्रत्येक चरित्रले त्यहाँ गर्नुपर्ने कुरा गर्छ, मूल रूपमा त्यहाँ कार्य असाइन गरिएको। दुर्भाग्यवस तिनीहरू भन्दा बढि जानु हुँदैन। साथै यो सम्पूर्ण श्रृंखला भर आम विषय हो।
कारण7बीज हेर्न लायक छैन - के7बीज हेर्न लायक छ?
डिस्टर्स्टफुल वर्ण - के7बीज हेर्न लायक छ?
यसले मैले माथि भनेको कुराको विरोधाभास हुन सक्छ, यद्यपि यो भन्न आवश्यक छ। Se बीजमा चरित्रहरू राम्रोसँग राम्रोसँग लेखिएको छैन, बोरिंग र अनियन्त्रित सबैभन्दा खराब हो। त्यहाँ अति नै बढाइबरी केहि पनि थिएन जुन उनीहरुलाई बाहिर उभ्याइयो। वास्तवमै यस शोका पात्रहरू हिट वा मिस हुन्, त्यहाँ केही दर्शकहरू छन् जो त्यहाँ मेरो जस्तै बकवास गर्छन् र त्यहाँ केही दर्शकहरू छन् जो त्यहाँ ठिक ठान्छन्, (बहुमत), म तपाईंलाई के भन्न सक्छु कि त्यहाँ हुनेछैन त्यहाँ राम्रो, वा नराम्रो, ठूलो भनेर सोच्ने जोसुकै होस्।
सेटिङ - के7बीज हेर्न लायक छ?
Se बीजमा सेटिंग पनि अर्को कारक हो जसले मौसमलाई असर गर्छ कि गर्दैन7eds बीज हेर्न लायक छ, किनकि यो राम्रो हिट वा मिस पनि छ। जापानको भू-भागमा भएको क्षुद्रग्रहको घटनाहरू पछि Se सिडको कथा लिने घटनाहरूको पछाडि एक apocalyptic जापानमा सेट हुनु विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा हो। मलाई सुरुमा सेटिंग्स मनपर्‍यो तर कथामा यो द्रुत रूपमा समस्या भयो। यो अवधारणा हो कि +००+ वर्षमा चरित्रहरू निद्रामा परेको छ नयाँ संसार बिस्तारै विकास हुँदै गएको छ, हामी यसलाई संसारमा उनीहरूको भिडन्तको माध्यमबाट देख्न सक्छौं, र पक्कै पनि ती विशाल कीराहरू र पशुहरूले उनीहरू सामना गर्छन्। त्यहाँ असंख्य प्लोट प्वालहरू र निरन्तरता त्रुटिहरू छन् जुन सबै यस सेटिंगबाट आउँछन् र यो श्रृंखलामा धेरै समस्याहरूको जड हो।
भयानक प्यासि? - के Se वटा बीजहरू हेर्न लायक छन्?
7 सीडको बारेमा मेरो छातीबाट छुट्ने अर्को कुरा प्यासि was्ग थियो, जुन धेरै खराब छ। कहिलेकाँही यो सुपर छिटो हुन सक्छ, केही सेकेन्डको मामलामा घण्टा र दिनहरूमा पूर्ण रूपमा छोडिन्छ, अन्य पटक यो पूर्णतया बिन्दुमा ढिला हुन्छ जहाँ एक दिनले २ एपिसोड लिन सक्दछ। यो उदाहरण लिनुहोस्, एपिसोड by मा वर्णहरूले उनीहरूले भेट्ने केही अन्य समूहलाई उल्लेख गर्छन् (जुन त्यहाँ2बर्ष भयो) तिनीहरू त्यहाँ १ महिना भन्दा बढी भइसकेका छन्। त्यसोभए हामी हेर्न सक्दछौं कि यो कति लामो भयो ep एपिसोडको स्पेसमा। तिनीहरू सबै समान पोशाकमा छन् र वास्तवमा जस्तो देखिन्छ उनीहरूले सुरू एपिसोडमा गरे।
संवाद - के7बीज हेर्न लायक छ?
त्यहाँ एक भनाइ छ कि तपाईंले साच्चै राम्रो संवाद राम्रोसँग याद गर्नुहुन्न? यो केवल तपाईंले मात्र महसुस बिना प्रवाह गर्दछ। ठिक छ भने, त्यो हो भने बीजहरूसँग केही नराम्रो संवाद हुन्छ जुन म एनिमेमा भेट्दछु, एक्लै छाँटकाँट गरौं। हो, मैले अंग्रेजी डब संस्करण हेरें र म बुझ्दछु कि वार्तालाप केहि संक्रमण संक्रमणमा हुन सक्छ र म कहिले पनि बुझ्न सक्दिन कि मूल लेखकले वास्तवमा के भन्न खोजेको हो।
जे होस्, म आफैं लात चाहन्छु यदि मैले सूचीमा यो उल्लेख नगरेको किनभने यदि तपाईं वार्तालापको ख्याल राख्नुहुन्छ भने Se बीज तपाईंको लागि नहुन सक्छ, किनकि संवाद अवास्तविक छ, यसले बारम्बार शो ब्रेक गर्दछ नियम बताउँदैन, कहिलेकाँही यो पूर्ण अर्थहीन हुन्छ तर प्राय: जसो यसले कथालाई अगाडि बढाउने काम गर्दछ वा उखु चराहरूको भावनाहरू व्यक्त गर्दछ जुन यसलाई पहिलो स्थानमा प्रयोग गर्दछ। धेरै मा यो बिना नै यो धेरै हाँस्न योग्य छ र तपाईं सजीलै देख्न सक्नुहुन्छ यो आर्मेचर छ।
लेखकले यसलाई गहिरो (भावनात्मक) बनाउने प्रयास गर्दछ तर यसले काम गर्दैन, भोज एक्टर्ससँग मिलेर (जुन यसले कुनै पक्ष पाउँदैन) यसले धेरै टाँसिन्छ तर इमान्दार हुन मैले यो अपेक्षा गरेको थिएँ कि मैले देखेको बित्तिकै "नेटफ्लिक्स मूल "एपिसोड १ को शुरूमा ठूला रातो अक्षरहरूमा, मैले पहिले नै थाहा पाइन कि म केमा थिएँ जुन मैले देखें।
अव्यावहारिक कथा - के7बीज हेर्न लायक छ?
मलाई पूर्ण रूपले थाहा छ कि Se बीज फिक्शनको काम हो तथापि यो सब कथाहरू हुन् जसमा मसँग साँच्चिकै समस्याहरू थिए। उदाहरणको लागि कि ग्रीष्मकालीन समूह बी को विभाजन समूहहरु मानिसहरु को रूप मा पहिले कहिल्यै आफ्नो जीवन मा सामना कहिल्यै नयाँ नयाँ भूभाग सजीलै नेभिगेट गर्न सक्षम छन् भन्ने तथ्य। साथ साथै यसै रूपमा तिनीहरूले रेडियो वा केहि पनि प्रयोग बिना कुनै प्रकारको संचार बिना नयाँ दुनिया खोजी र अन्वेषण पछि पुन: समूह गर्न सक्षम छन्, यद्यपि तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा एपिसोड and र in मा सबै समूह।
उनीहरूसँग पनी जहिले पनि पानी र खाना हुन्छ जहाँसुकै भए पनि। तिनीहरूले यी भूमिगत कक्षहरू (सबै समय) भेट्टाउँछन् जहाँ सुविधाजनक भोजन र पानीका साथै अन्य आवश्यक चीजहरू हुन्छन्। समस्या यी मुद्दाहरू होइन (र अधिक धेरै) व्यक्तिगत रूपमा यो यस श्रृंखला जस्तै यी सबै मुद्दाहरूको हुने सम्भावना हो। मलाई लाग्छ कि यो धेरै राम्रोसँग लेख्न सकिन्छ, र त्यसैले anime वास्तवमै एक मौका खडा हुनेछ यदि हामी अहिले दिएको छ भने।
नराम्रो आवाज अभिनय - के7बीज हेर्न लायक छ?
सामान्यतया मैले भोज अभिनयमा मेरो राय दिदिन र म आदर गर्दछु कि कलाकारहरूले आफूलाई वास्तविक व्यक्तिको दिमागमा राख्न यो कठिन भएको भए यो कथा वास्तवमै सत्य हो र कथा होइन भने। मलाई लाग्छ कि लेखकले हामीमाथि के प्रयोग गर्ने कोशिश गरिरहेका छन्, मानव जातिले काम गर्ने छ र यस वास्तविक परिदृश्यमा सोच्दछ। यो रमाईलो अवधारणा हो र यसले7बीजको सम्भावनाको बारेमा मेरो कुरालाई दृढ बनाउँछ। किनभने यो एक महान विचार हो र यो एक समान हदमा गरिएको छ। यस जस्तो धेरै बाँच्ने श्रृंखलाहरू छन् र तिनीहरू अधिक राम्रो हुन्छन्।
मलाई लाग्दछ कि लेखक फरक भिन्नताका लागि जाँदै थिए र हुनसक्छ म उनको कार्यलाई उसको परिप्रेक्ष्यमा देख्न सक्दिन। आवाज अभिनयले श्रृंखलालाई धेरै हिसाबले सहयोग गर्दैन, यो अविश्वसनीय जबरजस्ती गरियो र यो भयानक देखिन्छ। कहिलेकाँही पात्रहरूले अरू दृश्यमा कस्तो आवाज निकाल्दछन् आवाज गर्दैनन्, तिनीहरू मूर्खको अव्यावहारिक लाइनका संवादहरू भन्छन् जसले यस अवस्थामा कहिले पनि भन्दैन। वार्तालाप चलाख र भावनात्मक हुन कोसिस गर्दछ तर यसले कहिले काम गर्दैन। चरित्रहरू जो noramlly मूर्ख र मनमोहक थिए केहि भन्न को लागी आउँछ जो भावनात्मक र गहिरो रूपमा आउँछ।
मूल रूपमा आवाज अभिनय संवाद को लागी चिहान खन्छ। मलाई थाहा छ यो मूर्ख लाग्दछ तर शाब्दिक रूपमा यो हो। ती दुबैको समान प्रभावहरू छन् र त्यहाँ दुबै एक अर्का जस्तो खराब छन्।
राम्रो संगीत जुन विषयवस्तुसँग जान सक्दैन - के7सीडहरू हेर्न लायक छन्?
मलाई Se वटा बीउहरूमा संगीत धेरै मनपर्‍यो, जबकि यो उत्थान, प्रकाश र प्रेरणादायी भए पनि। केवल समस्या यो थियो कि यो श्रृंखलाको विषयवस्तुको साथ गएको थिएन, जुन वास्तवमै निराश थियो। त्यहाँ केहि राम्रा ट्र्याकहरू थिए जसले मेरो दिमागलाई साँच्चिकै हटाईदियो जति सबै भय .्कर थियो। ट्र्याकहरूको समय र प्लेसमेन्ट पनि राम्रो थियो, तिनीहरू भर्खरै मैले भनेजस्तै श्रृंखलाको विषयवस्तुसँग मेल खाँदैनन्।
मलाई थाहा छैन कि नेटफ्लिक्स वा उत्पादन कम्पनीले केहि ट्र्याकहरू ल्याउन सकेन जुन वास्तवमै अस्तित्व विषयवस्तु फिट हुन्छ। उनीहरूसँग बजेट थियो, त्यो निश्चित छ, प्रयास मात्र होईन।
सुस्त चरित्र डिजाइन - के7बीज हेर्न लायक छ?
Se बीजमा क्यारेक्टर पूर्ण रूपमा बेकारका छन् र यद्यपि हेर्नुहोस्। मैले ती मध्ये कुनै पनि पनि कुनै पनि तरिकामा आकर्षक, आकर्षक वा प्रेरणा पाइन। उनीहरुकालागी बिर्सने को लागी भन्दा म भन्न सक्ने अरु केही छैन। प्रत्येक चरित्र केवल केही ट्रोप दिमागमा डिजाइन गरिएको थियो र संवादले उत्पादनले केवल उनीहरूलाई १०x अधिक असहनीय बनाउँदछ। उदाहरण को लागी, जब एक प्रतिस्पर्धी टीम द्वारा खाना चोरे पक्राउ Asai भन्छन् “अह ना मानिस, म केहि परोपकारी खोज्दै थिएँ” उह, मलाई यो पनि उद्धृत गर्न दुख दिन्छ, यो तपाइँको औंलाहरु को बारे मा हुन्छ जब भन्न छैन काटियो तर यदि कसैले वास्तवमा यो हेर्न चाहन्छ भने म केहि खराब गर्ने छैन।
बर्बाद सम्भावित - के7बीज हेर्न लायक छ?
यो मैले अघि बनाएको बिन्दुको निरन्तरता हो, तर म फेरि भन्न चाहन्छु कि Se बीजमा ठूलो मात्रामा व्यर्थको सम्भावना छ। श्रृंखला धेरै राम्रो हुन सक्छ। मंगामा टिप्पणी गर्न सक्दिन किनकि मैले यो पढेको छैन, यदि नेटफ्लिक्सले यस मa्गालाई अनुकूलन गर्ने राम्रो काम गरिरहेको छ भने यो राम्रो देखिदैन। म सायद चिन्तित छैन। त्यहाँ धेरै फरक-फरक भू-प्लाटहरू छन् जुन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ र केहि परिवर्तनका साथ हेर्न लायक हुने र मैले भन्न सक्ने हिम्मत गर्ने, रमाइलो लाग्ने।
अनियमित र बेकारका प्लॉट उपकरण - के7बीज हेर्न लायक छ?
Se सीडमा प्लट उपकरणहरू धेरै बेकारका छन् र वास्तवमै मैले प्राप्त गरेका निर्माताहरू वा लेखकले जे मन पराउँछु भन्ने कहिल्यै प्राप्त गर्दैनन्। बेवकूफ अर्थहीन फ्लैशब्याक, कि वास्तव मा संक्षिप्त कुराकानी गर्न सकिन्छ यस को लागी बिना र समय बिना। त्यहाँ केहि अक्षरहरू हुन् जसले स्क्रीन of मिनेट जति पाउँदछन् र त्यसपछि हामी उनीहरूबाट फेरि कहिले पनि सुन्दैनौं, हामी संक्षिप्त रूपमा परिचय पाउँछौं र त्यसपछि चरित्र मारिन्छ वा पूर्ण रूपमा बिर्सिन्छ।
यो एकै समयमा झगडाउँदा अत्यन्तै निराश हुन्छ, किनकि हामी त्यस चरित्रमा लगानी गर्न थाल्दा थोरै समय खर्च गर्छौं, र त्यसपछि उनीहरू मारिए पछि तपाईलाई यो अनौंठो महसुस हुन्छ। यो राम्रो हुनेछ कि हामीलाई (दर्शकहरूलाई) उनीहरूसँग समायोजन गर्न अझ समय दिनुहोस् र त्यसपछि हामी लगानी गर्न सक्नेछौं, जसले गर्दा मृत्युले हामीलाई र कथालाई प्रभाव पार्दछ।
दोस्रो दर चरित्र आर्क - के Se वटा बीजहरू हेर्न लायक छ?
चरित्र आर्क जुन मैले Se बीजमा देखेको छु धेरै नराम्रो छ, बोरिंग र अनावश्यक उल्लेख छैन। तिनीहरू केवल त्यति राम्रो थिएनन् र सामान्य रूपमा मसँग समायोजन गर्न र एपिसोड र आर्कहरू प्रगति गर्दा उनीहरूलाई हेर्न पर्याप्त समय थिएन। आश्‍चर्यजनक कुराले सबैलाई हतार गर्‍यो र यो श्रृंखलाको माध्यमबाट साझा विषय हो। यो त्यस्तो हो कि ती साना २२ मिनेट एपिसोडहरूमा सबै कुरा क्र्याम गर्न कोशिस गर्दै थिए।
भयful्कर प्यासि withको साथ जोडी जोडिएर rushed बीजहरू मात्र जोडिए जुन यसमा थपियो। वास्तवमा मलाई यो चाखलाग्दो छ कि प्रत्येक व्यक्तिगत मुद्दाहरूको मद्दत गर्दछ र अरूबाट फाइदा हुन्छ, अण्डभ्युअल समस्याहरूको रूपमा तिनीहरू सजिलैसँग समाधान गर्न सकिन्छ, तर जब ती सबैले एक अर्कालाई मद्दत गर्छन् यो समस्या बन्छ, यो त्यो हो जुन Se बीजहरूसँग भयो।
निष्कर्ष - के7बीज हेर्न लायक छ?
तपाईं Se सक्नुहुनेछ जहाँ Se बीजहरू सम्बन्धी धेरै समस्याहरू छन् र यी सबैले यसमा हेर्ने लायक छन् वा छैनन् लामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ। हेर्ने लायकका कारणहरू कडाइका साथ ती कारकहरू भन्दा बढी हुन्छन्। यसैले म तपाईंलाई माथि छलफल गरेको कुराको आधारमा यो श्रृंखला हेर्न सल्लाह दिँदैन। Se बीज एक विशाल सम्भावनाको श्रृंखला हो र यो शर्मको शर्म हो कि यो यस शोमा खेर गयो।
सिजन १ को लागी रेटिंग:
गरीब चरित्रहरू, अव्यावसायिक कथा, नराम्रो संवाद, फालतु प्लट उपकरणहरू र धेरै धेरै समस्याहरू सबै थोरै समयहरूमा श्रृंखलामा सबै स्नोबल, प्रत्येक एपिसोड मात्र २२ मिनेट लामोको साथ। यदि तपाईं यो फिल्मको बारेमा राम्रो गुणहरू तपाईंले यो हेर्दै वारन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने लाग्नुहुन्छ भने अघि बढ्नुहोस्, तपाईंलाई चेतावनी दिइएको छ। यदि तपाईं एक अस्तित्व प्रकारको एनिमेसको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, मृतको हाईस्कूल प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं हाम्रो लेख एक सीजन २ मा मरेको Highschool को लागी पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
मलाई आशा छ कि यस लेखले तपाईंलाई7बीजहरू हेर्न चाहान्छन् वा गर्दैन भनि निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ, यदि योसँग कृपया यसलाई मनपराउने र यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने साझा गर्न विचार गर्नुहोस्, त्यसले हामीलाई धेरै मद्दत गर्दछ।
भाँडा- A- प्रेमिका वर्थ हेर्दै हुनुहुन्छ?
हाम्रो सबै लेखहरू यहाँ पढ्नुहोस्: https://cradleview.net/all-posts/
हाम्रो शीर्ष छनौट श्रृंखला यहाँ पढ्नुहोस्: https://cradleview.net/top-5/
हाम्रो समीक्षा पढ्नुहोस् र के यो लायक हेर्ने लेखहरू यहाँ छन्: https://cradleview.net/reviews/
हाम्रो सबैभन्दा भर्खरको लेखहरू यहाँ पढ्नुहोस्: https://cradleview.net/most-recent-posts/
हाम्रो चरित्र प्रोफाइलहरू यहाँ पढ्नुहोस्: https://cradleview.net/character-profiles/
हाम्रो समुदाय पृष्ठ: https://cradleview.net/community-page/
दान गर्न चाहनुहुन्छ ?: https://cradleview.net/donations/
हाम्रो अन्य पालना दृश्य लिंक सामाजिक:
हाम्रो फेसबुक पृष्ठ: https://www.facebook.com/Cradle-View-100860831773122/
हाम्रो YouTube च्यानल: https://www.youtube.com/channel/UCRYkAdQhzg2HYxWoZrKmgdw
हाम्रो इन्स्टाग्राम पृष्ठ: https://www.instagram.com/cradleview/
टैग:7बीउ 7seedsanimefullleightreview7बीउ स्यानिमेरीव्यू 7seedsanimereview 7seedsanimereview article7बीज चरित्र विश्लेषण7बीज वर्ण 7seedscompreferencesarticle7बीज समीक्षा 7seedsreviewanime7बीज समीक्षा लेख anime7 बीज animeevenseeds के क्यारेक्टरिन7 बिउ राम्रो छ? के 7seedsanime हेर्न लायक छ? के7बीउ राम्रो छ?7बीज योग्य छ के7बीज योग्य छ? is7seedsworthtatchatch is7seedsworthwatchatch? के सेभेन्सीडसानिमा हेर्न लायक छ? के सेभेन्सीड्स हेर्न लायक छ? shaliwatch7 बीज shaliwatch7 बीज? shouldiwatch7 बीजहरू Iwatchanime7seeds गर्नुपर्छ चाहिएको एनिमेसबीड?
अघिल्लो प्रविष्टि Chisa Kotegawa - चरित्र प्रोफाइल
अर्को प्रविष्टि किन कालो लगुन सिजन get प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ